आफ्नै औंलाले शरीर नाप्दा आफ्नो आयु थाहा हुन्छ ? | Sindhuli Saugat
आफ्नै औंलाले शरीर नाप्दा आफ्नो आयु थाहा हुन्छ ?
सिन्धुली साैगात संवाददाता २०७४ माघ २८ गते आइतवार काठमाडौं
शास्त्रमा भनिएको छ कि हरेक ब्यक्तिको जन्मका साथ नै मृत्यु पनि तय हुन्छ । हरेक मानिसले जन्मसँगै मृत्युको मिति समेत लिएर आएको हुन्छ । यद्यपी यो जीवन र मृत्युको रहस्यबारे भविष्यवाणी भने हरेक मानिसलाई चासोको विषय हुन्छ ।
शास्त्रमा यो प्रश्नको जवाफ दिइएको छ । हाम्रो शरीरका विभिन्न अंगले नै हाम्रो आयुबारे भविष्यवाणी गर्न मद्दत गर्ने शास्त्रको भनाइ छ । समुन्द्रशास्त्रका अनुसार हातको रेखा र निधारको रेखाले आयुबारे जानकारी दिन्छ ।
यो शास्त्रका अनुसार निधारका चार रेखाले कन्चटको पल्लो भाग सम्म छोएको छ भने यस्ता ब्यक्तिको आयु राम्रो हुन्छ । निधारको एक रेखाले २५ वर्षको आयु रहेको जनाउँछ । यस्ता रेखा जति स्पष्ट हुन्छन् त्यति नै दीर्घायु हुने मानिन्छ ।
आयुबारे जानकारी लिने सबै भन्दा सजिलो तरिका हो आफ्नै औंलाले शरीर नाप्नु । भविष्य पुराणका अनुसार जुन ब्यक्तिको उचाइ आफ्नै हातले नाप्दा चार हात १२ अंगुल छ त्यस्तो ब्यक्ति दीर्घायु हुन्छ ।
जुन ब्यक्तिको उचाइ १०० अंगुल मात्र हुन्छ त्यस्ता ब्यक्तिको आयु मध्यम स्तरको हुन्छ । यिनीहरु धेरै छिटो पनि मर्दैनन् र धेरै ढिलो सम्म पनि बाँच्दैनन् ।
९० अंगुल हुने ब्यक्तिको आयु अल्प वा औषत हुने मान्छ । हत्केलाको माथिल्लो भागमा नाडीको छेउँमा गोलो रेखा हुन्छ । त्यसलाई मणिबन्ध रेखा भनिन्छ । यसले तपाइँको आयुबारे जानकारी दिन्छ । यो रेखाबाट मानिस कति बाँच्ने भन्ने समेत थाहा हुन्छ ।
पछिल्लाे - सरस्वती लामाले कपडा खोल्न थालेपछि युवाहरुले लखेटे
अघिल्लाे - पूर्वराजाले भारतमा हिन्दूधर्म बचाउन विशेष अपिल गरे